देउवासँग यसरी टक्कर लिदैं छन खुमबहादुर – YesKathmandu.com
शनिबार ०४, असार २०७३
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन सकिएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि मुख्य पदाधिकारीहरु मनोनित गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले किन आलटाल गरिरहेका छन् ?
महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारीहरु मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पदाधिकारी मनोनित नगर्नुले देउवाको असक्षमता बढ्दै गइरहेको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
गएको १३ औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका रुपमा परिचित भइसकेका खुमबहादुर खड्काले खुलेरै शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरी सभापतिमा बिजय गराउन सफल भएका थिए । देउवालाई सहयोग गरेवापत प्रभावशाली नेता खड्कालाई उपसभापति बनाउन देउवा, खड्का र भारतका दूतका रुपमा लिने गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहबीच सहमति भएको थियो ।
गएको तेह्रो महाधिवेशनमा प्रभावशाली नेता खड्काले जुन सभापतिका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्यो त्यही सभापति बन्ने अवस्था थियो । खड्काको पकेट भोट अर्थात् प्रतिनिधिहरु चार सयदेखि पाँच सयसम्म रहेको कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेलले बताएका छन् ।
यता, पदाधिकारी चयन गर्न देउवा आफ्ना विश्वासपात्रका रुपमा रहेका विमलेन्द्र निधिले उपसभापतिको दावी गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । देउवाले सहमतिअनुसार खड्कालाई उपसभापति बनाएको खण्डमा आफ्ना विश्वासिला पात्र निधि विच्किने त्रासले देउवाले पदाधिकारी मनोनितमा ढिलाई गर्दै आइरहेको देउवा स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैले देउवाले चाँडै नै महासमिति सदस्यहरुको बैठक डाकी नेपाली कांग्रेसको विधान नै संशोधन गर्ने तिर लागेका छन् । विधान संशोधनमा पदाधिकारीहरु थपी उपसभापति तीन, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री पाँच बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था भए पनि देउवाको समस्या समाधान हुने भने देखिएको छैन । उपसभापति मनोनित गर्दा पहिलो नम्बरमा कसलाई बनाउने भन्ने पनि विवाद त्यतिकै छँदैछ । यदि देउवाले खड्कालाई पहिलो नम्बरमा उपसभापति मनोनित गरेको खण्डमा निधिले असन्तुष्ट जनाउने छन् भने निधिलाई एक नम्बरका गरेको खण्डमा खड्काले असन्तुष्ट जनाउने देखिएको छ ।
पुराना नेता तथा कार्यकर्ता माझ निकै लोकप्रिय बनेका खुमबहादुर खड्काको बारे गएको महाधिवेशनले नै प्रष्टरुपमा देखाइसकेको छ । खड्काले अब छुट्टै समूह खडा गर्ने सोचमा रहेको नेका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद शंकर भण्डारीले बताएका छन् ।
सहमति अनुसार उपसभापति मनोनितमा देउवाले आलटाल गरेका कारण खड्काले आउँदै गरेको पार्टीको भातृ संगठनहरुको अधिवेशनमा आफ्नो बेग्लै समूह बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेका छन् ।
खड्काले चाँडै नै हुन लागेका भातृ संस्था तरुण दलको अधिवेशनको लागि डडेल्धुरा पार्टी सभापति कर्ण मल्ल वा तरुणहरुको विचमा निकै लोकप्रिय मानिने युवा नेता मीन कृष्ण महर्जनलाई अध्यक्षको उम्मेदवारी बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेविसंघमा पनि आनन्द त्रिपाठी वा सुभराम बस्नेतलाई अध्यक्षको लागि उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । महिला संघमा पनि कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने बारे खड्काले छलफल अगाडि बढाइरहेका छन् ।
‘हामीलाई भेडा बाख्रा बनाएको’ भन्दै कमरेडहरुबीच भकुमार !
निर्धाणाधीन सेफ्टी ट्यांकीमा निस्सासिएर पाँच मजदुरको मृत्यु
बीरगन्जमा फेरी तनाव, पाँच प्रर्दशनकारी घाइते
भारतीय हस्तक्षेप र संविधान जारीप्रति किन मौन छन पूर्वराजा ?